ကုမ္ပဏီ profile များကို
ငြမ်း Frame က
ရင်ပြင် & Rectangular Hollow ပုဒ်မ
Ranpu သတ္တုထိုအတောအတွင်းစသည်တို့ကို, ကျားကန် shoring, ငြမ်းဘောင်ထိုကဲ့သို့သောသံမဏိ formwork အဖြစ်ငြမ်းအမျိုးမျိုးတို့ကို၏သုတေသနဖွံ့ဖြိုးရေး, ထုတ်လုပ်ခြင်း, ရောင်းချခြင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်စေ့စပ်ပြည့်စုံသောအဆောက်အဦးပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါသည်, ကျနော်တို့အမျိုးမျိုးသောသံမဏိပိုက်ထောက်ပံ့နိုင်, ထိုကဲ့သို့သော စသည်တို့ကိုငြမ်းပြွန်, သွပ်ရည်စိမ်ပိုက်အဖြစ်
အထူးသဖြင့် 2016 မှာငါတို့ဂဟေနည်းပညာ AWS လက်မှတ်ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏ရေးဆွဲသည်နှင့်အညီ OEM ဝန်ဆောင်မှုထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လုပ်မှုအသင်း formwork ဒီဇိုင်းနှင့်သင့်စီမံကိန်းများနှင့် ပတ်သက်. အချို့သောအကွံဉာဏျပေးနိုင်ပါသည်။
အရည်အသွေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအနာဂတ်တည်ဆောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ဖြစ်ပြီး, ယခုကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ကျယ်ပြန့်ဥရောပ, အမေရိက, အာရှ, သြစတြေးလျနှင့်အာဖရိကအတွက် 30 ကျော်နိုင်ငံများသို့ရောင်းချခဲ့ပြီ။
ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူအလုပ်မလုပ်, သင်ဘတ်ဂျက်ထဲကနေပြီးစီးဖို့, သင့်စီမံကိန်းများတပြင်လုံးကိုအဆင့်တလျှောက်လုံးအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့တစ်နေရာတည်းမှာဝန်ဆောင်မှုကိုတွေ့ကြုံခံစားပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့အကောင်းဆုံးနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, အမိန့် On-site ကြီးကြပ်, ပို့, ဤထက် ပို. ပင်အားဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီရန်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဈေးကွက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပို့ကုန်ဌာန, Ranpu (Tianjin) နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေး Co. , Ltd မှအပေါ်အခြေခံပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကိုသံမဏိ coil, သံမဏိစာရွက်, C ကိုသံမဏိကဲ့သို့အချို့သက်ဆိုင်ရာထုတ်ကုန်ထောက်ပံ့နိုင်ပါတယ်
Ranpu ဒီစက်မှုလုပ်ငန်းအားလုံးကိုတည်ဆောက်နဲ့အတူလုံခြုံတဲ့, ထိရောက်, ကျေးဇူးတင်ကမ္ဘာတွင်အောင်, ပထမလူတန်းစားယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြည့်စုံဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများသင်တန်းနည်းပြဖြစ်ကြိုးပမ်း။
နေရပ်လိပ်စာ: Weisan လမ်း, Songmen စက်မှုဇုံ, Wuqiao, Cangzhou စီးတီး, Hebei ပြည်နယ်, တရုတ်